Antsipiriany misimisy momba ny Android m | Androidsis
Android M sy antsipiriany hafa hodinihina
Manuel Ramirez | | About us, Tutorials
Roa andro lasa izay dia naneho hevitra aho antsipiriany efatra amin'ny Android M fa tsy azontsika atao tsy jerena izay toetran'izy ireo fanatsarana ny fanarenana Android, fanjifana Doze, ny solaitrabe zarazaraina ho an'ny klavier amin'ny takelaka sy ny fampahalalana tena nohatsaraina kokoa tamin'ny fampiharana avy amin'ny sehatra. Seho vaovao sasantsasany izay ampiana amin'ny habetsany amin'izy ireo izay hitantsika isan'andro na izay nampahafantariny antsika. Google amin'ny teny fototra herinandro lasa teo tamin'ny I / O 2014.
Amin'ireo antsipiriany na fiasa miafina ireo dia mbola misy vitsivitsy ho fantatra, toy ireo maromaro izay holazaiko etsy ambany ary anisan'izany ny miavaka izany vatasarihana fampiharana izay zaraina mitsangana izao na ny dikan'ny hoe mikaroha Google amin'ny alàlan'ny feo avy amin'ny efijery mihidy. Andian-toetra kely maromaro izay ireo antsipiriany ireo izay mazàna manandanja be ho an'ny mpampiasa sasany.
1 Mpitantana fahatsiarovana RAM vaovao
2 Esory ny app amin'ny birao
3 Mpantsaka fampiharana vaovao
4 Misaraka ny fanaraha-maso ny habetsaky ny fanairana, ny media ary ny antso
5 Fikarohana Google amin'ny feo
6 Fandefasana tarika 2.4GHz / 5GHz roa
Mpitantana fahatsiarovana RAM vaovao
Avy amin'ny Settings no ahitanao mpitantana fahatsiarovana RAM vaovao. Raha te hiditra azy dia vita amin'ny «apps», misafidy «Advanced» ianao ary farany «Memory». Hiseho eo alohanay ny fitaovana fanaraha-maso fahatsiarovana vaovao mba hahafantaranao indray mipi-maso vetivety hoe ohatrinona ny RAM ampiasaina isaky ny fampiharana.
Io fitaovana io dia mamela azontsika atao aza ny manery ny fampiharana iray hikatona mba hanafahana ny rafitra fitadidiana RAM. Vaovao vaovao avy amin'ny rafitra Android M mihitsy.
Esory ny app amin'ny birao
Miaraka amin'ny Android M azonao atao farany esory ny apps amin'ny desktop avy amin'ny mpandefa Google Now amin'ny alàlan'ny fitondrana azy ireo eo an-tampon'ny efijery. Tsotra be, ary izay maka tahaka ny mpandefa hafa toa an'i Nova izay amin'ny alàlan'ny gazety tsotsotra sy lava dia mamela anao hanaisotra ny apps avy amin'ny birao.
Mpantsaka fampiharana vaovao
Android M dia manana vatasarihana fampiharana mitsangana vaovao. Eto isika dia afaka mahita endri-javatra vaovao nalaina tahaka tamin'ny mpandefa fampiharana hafa toa ny Action Launcher, satria afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny fampiharana marobe, azontsika atao izany amin'ny litera miseho eo amin'ny sisiny ankavanan'ny efijery.
Tsindrio lava ary amin'ny alàlan'ny fitsipika mitsivalana ny rantsan-tananao dia afaka mahita ilay app avy hatrany isika tadiavina.
Misaraka ny fanaraha-maso ny habetsaky ny fanairana, ny media ary ny antso
Azontsika lazaina ihany izany amin'ny farany Android dia manana fifehezana volume ampy ho an'ny zavatra ilaintsika isan'andro. Azonao atao izao ny mampidina ny feon'ny fanairana raha avelantsika mafy ny mozika.
fotsiny ny zana-tsipìka kely eo amin'ny fanaraha-maso ny boky dia nitarina hahita ireo mpikorisa telo.
Fikarohana Google amin'ny feo
Con swipe avy miankavia sy miankavanana eo amin'ny efijery hidin-trano amin'ny Android Ny fikarohana Google amin'ny alàlan'ny feo dia tafiditra haingana. Fandraisana haingana an'ireo izay tian'ny ankamaroantsika ho tonga eo alohan'ny iray amin'ireo serivisy ankafizinay indrindra.
Fandefasana tarika 2.4GHz / 5GHz roa
Ny mampiavaka ny mamorona hotspot azo entina Mahazo fanohanana amin'ireo tambajotra 5GHz izy io arakaraka ny fitaovana ananantsika. Raha misy tamba-jotra 5GHz noforonina tamin'ny findainao dia hahita safidy ianao handaminana ny teboka WiFi. Azonao atao ny misafidy 5GHz amin'ny sehatr'asa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Android M sy antsipiriany hafa hodinihina
Hividy terminal Android vaovao ve ianao?. Versus, mpampitaha teknolojia
Fampiharana Android mahatalanjona: Manam-pahaizana momba ny rakitra anio, ilay mpikaroka rakitra faka izay manana izany rehetra izany